အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Cloud သိုလှောင်မှုဆိုက်များနှင့်သူတို့၏အင်္ဂါရပ်များ
ဝက်ဘ် & ရှာရန်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး
အီးမေးလ်ပို့ရန် & Messaging ကို
Outlook နဲ့သိကောင်းစရာများ & Tricks
ဂျီမေးလ်သိကောင်းစရာများ & Tricks
Yahoo ကသိကောင်းစရာများ & Tricks
လမ်းညွှန်များ & ကျူတိုရီရယ်
Key ကို Concepts
Animation ရဲ့ & ဗီဒီယို
Computer ကို Concepts
Drivers & ဟာ့ဒ်ဝဲ
Installing & အဆင့်မြှင့်
Software ကို & Apps ကပ
Backup ကို & အသုံးအဆောင်များ
ဗီဒီယိုကို & အသံ
Browsers & အင်တာနက်ကို
တီဗီ & Home Theater
ဆက်စပ်ပစ္စည်း & Peripheral
ဂိမ်းများ & စက်များ
ဝက်ဘ် & ရှာရန် Web ၏အကောင်းဆုံး
ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ မှစ. , သမ်မာကမျြးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာရင်းဇယားမှအရာအားလုံးကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်း
သငျသညျမိုဃ်းတိမ်တွေအကြောင်းကြားဖူးတယ်ဒီတစ်ခါလည်း, ဒါပေမယ့်အတော်လေးသေးဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ခုန်တက်ကြပြီမဟုတ်။ ဤမျှလောက်များစွာသော options အမျိုးမျိုးနှင့်အတူထုတ်အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးအခမဲ့ cloud storage site ကိုဖြစ်သည့်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။
မွမ်းမံ: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, cloud computing စကဘာလဲ?
တစ်ဦးချင်းစီအားသာချက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိပါတယ်ကတည်းကသင်သည်များစွာသောသင်ကမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုကြည့်ဖို့တစျခုထက်ပိုကြိုးစားရန်ချင်တယ်။ ကလူအများကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံသိုလှောင်မှု provider တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပါဝင်သည်။ တကယ်တော့, ငါသည်ဤစာရင်းတွင်5ထဲက4ကိုသုံးပါ!
သငျသညျအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများ, ဓါတ်ပုံများ, ဂီတသို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပို device ကိုဖြတ်ပြီး shared ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအခွားသောဖိုင်များကိုရရှိပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှု option ကိုအသုံးပြုပြီးမကြာခဏထိုသို့ပြုမှအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလူကြိုက်များသည်မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များအထွေထွေအကျဉ်းချုပ်များအတွက်အောက်ပါစာရင်းတွင်ထွက်စစ်ဆေးပါ။
05 ၏ 01
Google Drive ကို
ဓာတ်ပုံ©အနုမြူပုံရိပ် / Getty Images
သင်အမှန်တကယ် Google Drive ကိုမှားမသွားနိုင်ပါ။ သိုလှောင်မှုအာကာသနှင့်ဖိုင်အရွယ်အစားအပ်လုပ်တင်ထားသည်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, က၎င်း၏အခမဲ့အသုံးပြုသူများအများဆုံးရက်ရက်ရောရောပါပဲ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အပ်လုဒ်များအတွက်ချင်သကဲ့သို့သငျအဖြစ်အများအပြားဖိုလ်ဒါကိုဖန်တီးနိုင်, သင်မူကားကိုလည်းဖန်တီးတည်းဖြတ်နှင့်ညာဘက် Google Drive မှာတိကျတဲ့စာရွက်စာတမ်းပုံစံများကိုဝေမျှနိုင်ပါတယ်မသာ။
ညာဘက်သင့်အကောင့်အတွင်းကနေ Google Doc သို့, Google စာရွက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးက Google စလိုက်ရှိုး Create, သင်က Google Drive ကိုမှလက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေရယူနိုင်တော့မည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့နှင့်အတူအမျှဝေအခြား Google အသုံးပြုသူများကသင်သည်ထိုသူတို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးလျှင်တည်းဖြတ်သို့မဟုတ်သူတို့အပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အခမဲ့သိုလှောင်မှု: 15 GB အထိ
100 GB လောက်များအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 1.99
1 တီဘီများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 9.99
10 တီဘီများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 99.99
20 တီဘီများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 199.99
အသက် 30 တီဘီများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 299,99
ခွင့်ပြု max ဖိုင်အရွယ်အစား:5တီဘီ (နေသမျှကာလပတ်လုံးက Google Doc သို့ format ကိုပြောင်းမကဲ့သို့)
desktop apps များ: Windows, Mac
မိုဘိုင်း apps များ: Android, iOS, Windows Phone ကိုပို»
05 ၏ 02
သောကြောင့်ယင်း၏ရိုးရှင်းများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ဒီဇိုင်း, Dropbox ကို အခြားအလွန်အမင်းအဖြစ် Google ကိုအပြိုင် ရေပန်းစား cloud storage service ကို ယနေ့က web အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်နှုတ်ဆက်ပြီး။ Dropbox ကို သငျသညျ, ရှိသမျှသင့်ဖိုင်များစုစည်းကူးယူထူးခြားတဲ့ link ကိုမှတဆင့်အများပြည်သူသူတို့နှင့်အတူဝေမျှနှင့်ပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ဖိုလ်ဒါကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု Facebook မှာ မျှဝေဖို့ Dropbox ကိုဖိုင်တွေ လည်း။ (ထိုကြယ်ပွင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး) ဖိုင်တစ်ဖိုင်အခါသင်အကြိုက်ဆုံးမိုဘိုင်း device ကိုပေါ်၌ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ, သင်မပါအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိလျှင်ပင်နောက်ပိုင်းတွင်ထပ်မံကြည့်ရှုရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တောင်မှအခမဲ့အကောင့်နဲ့, သင် Dropbox ကို (လွှဲပြောင်းနှုန်း 500 MB) join ဖို့လူသစ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်အခမဲ့သိုလှောင်မှု 16 GB အထိအခမဲ့သိုလှောင်မှုသင့်ရဲ့2GB ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ့်ကို Dropbox ရဲ့အသစ်ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းဝန်ဆောင်မှု, Carousel ထွက်ကြိုးစားနေများအတွက်အခမဲ့သိုလှောင်မှု3GB လောက်ရနိုင်တယ်။
အခမဲ့သိုလှောင်မှု:2GB ကို (နေရာပိုဝင်ငွေရရန် "ရှာပုံတော်" ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ။ )
1 တီဘီများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 11,99
န့်အသတ်သိုလှောင်မှု (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) အတွက်စျေးနှုန်း: တိုင်းအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်လလျှင် $ 17
10 GB ကိုသင် desktop သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း app ကနေတဆင့် upload တင်လျှင်န့်အသတ်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာထဲမှာ Dropbox.com ကနေတဆင့်အပ်လုဒ်လုပ်ထားလျှင်: ခွင့်ပြုခဲ့ max ဖိုင်အရွယ်အစား။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျသိုလှောင်မှုရုံ2GB ကိုအတူအခမဲ့အသုံးပြုသူအနေလျှင်, သင်သာသင့်ရဲ့သိုလှောင်မှုခွဲတမ်းယူနိုငျသောအရာကိုအဖြစ်ကြီးတွေအဖြစ်ဖိုင်တစ်ဖိုင် upload တင်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရ။
desktop apps များ: Windows, Mac, Linux,
မိုဘိုင်း apps များ: Android, iOS, BlackBerry, Kindle Fire ကပို»
05 ၏ 03
Apple က iCloud
သင်သည်မည်သည့်ရရှိပါသည် အကယ်. Apple ထုတ်ကုန် အလုပ်လုပ် မကြာသေးမီက iOS ကိုအပေါ် ဗားရှင်းသင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားသင့်ရဲ့ကို set up ဖို့တောင်းခဲ့တာ iCloud account မှာ ။ Google Drive ကို Google က tools တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးလိုပဲ Apple ရဲ့ iCloud ကို iOS features တွေနဲ့ functions တို့နှင့်လည်းနက်ရှိုင်းစွာပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ iCloud သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုစာကြည့်တိုက်များအပါအဝင် (ဝက်ဘ်ပေါ်မှာနှင့် iCloud) အားလုံးသင့်ရဲ့ Apple ကစက်တွေကိုဖြတ်ပြီးဝင်ရောက်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်နှင့်အသုံးဝင်သော features တွေတစ်အကွာအဝေး, သင့်အဆက်အသွယ်များ, သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်, သင့်စာရွက်စာတမ်းဖိုင်များ, သင့်စာညှပ်များနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးပေးထားပါတယ်။
အထိခြောက်လမိသားစုဝင်များပင် iCloud မှတဆင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုသုံးပြီး iTunes Store က, App Store ကိုနှင့် iBooks Store ကိုဝယ်ယူမှုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ Apple က iCloud ဒီမှာကမ်းလှမ်းသောအရာကိုအပြည့်အဝစာရင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်လည်းရဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် iTunes Match သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောဝမ်းခွဲထားပြီးကြောင်း CD ကိုဂီတအဖြစ်, iCloud အတွက်မဆို Non-iTunes ကိုဂီတတွေကိုသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်သော။ iTunes Match တစ်နှစ်လျှင်တစ်ဦးအပိုဆောင်း $ 24,99 ကုန်ကျသည်။
အခမဲ့သိုလှောင်မှု:5GB အထိ
50 GB ကိုများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 0.99
အပိုဆောင်းစျေးနှုန်းအင်ဖို: စျေးနှုန်းအနည်းငယ်သင်ဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒီနေရာမှာ Apple ရဲ့ iCloud စျေးနှုန်းစားပွဲပေါ်မှာထွက်စစ်ဆေးပါ။
ခွင့်ပြု max ဖိုင်အရွယ်အစား: 15 GB အထိ
မိုဘိုင်း apps များ: iOS, Android Kindle Fire ကပို»
05 ၏ 04
Microsoft က OneDrive (ယခင် SkyDrive ကို)
iCloud ကို Apple ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့ OneDrive Microsoft ကရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးသည် Windows PC ကိုတစ်ဦးက Windows တက်ဘလက်သို့မဟုတ်တစ်က Windows Phone ကိုသုံးပါလျှင်, OneDrive စံ cloud storage ကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Windows OS ကိုဗားရှင်း (8 နှင့် 8.1) နဲ့မည်သူမဆိုကြောင့်၌တရား built အတူပါလာပါလိမ့်မယ်။
OneDrive ရဲ့အခမဲ့သိုလှောင်မှုရာပူဇော်သက္ကာကို Google Drive ဖြင့်လက်ျာဘက်တက်လည်းမရှိ။ OneDrive သင်သည်ပေးသည် ဝေးလံသောဖိုင်ကို access ကို သငျတို့က MS Word documents, PowerPoint တင်ပြချက်များဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည် Excel စာရင်းဇယား မိုဃ်းတိမ်၌တိုက်ရိုက်နဲ့ OneNote တို့မှတ်စုစာအုပ်။ သင်မကြာခဏ Microsoft က Office ကိုအစီအစဉ်များကိုသုံးပါလျှင်, ဒီတစ်ခုမ brainer ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းလူသိရှင်ကြား, ဖိုင်တွေ share အုပ်စုကိုတည်းဖြတ် enable နှင့်သင့်ဖုန်းနှင့်အတူသစ်တစ်ခုတဦးတည်းဖမ်းယူအခါတိုင်းသင့်ရဲ့ OneDrive မှအလိုအလျှောက်ဓါတ်ပုံကိုအပ်လုဒ်တင်ပျော်မွေ့နိုင်ပါ။ Office 365 ကိုရဖို့ upgrade သောသူတို့အဘို့သင်သည်သူတို့ဖြစ်ပျက်အဖြစ်တိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့တည်းဖြတ်ကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူအခြားလူနှင့်အတူမျှဝေစာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ပူးပေါင်းနိုင်ပါ။
200 GB ကိုများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 3.99
1 တီဘီများအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 6.99 (ပေါင်းသင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Office 365 ရ)
ခွင့်ပြု max ဖိုင်အရွယ်အစား: 10 GB အထိ
မိုဘိုင်း apps များ: ကို iOS, Android, Windows Phone များ
05 ၏ 05
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ, ထောင့်ကွက်ရှိပါတယ်။ သုံးစွဲဖို့အတော်လေးအလိုလိုသိပေမယ့်, Box ကိုလိုခငျြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများကအနည်းငယ်ပိုပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး cloud storage options များ ။ ပိုပြီးနှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများမှကုန်ကျစခွေငျးငှါပိုကြီးတဲ့ဖိုင်သိုလှောင်မှုအာကာသနေစဉ်, Box ကိုတကယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်, အွန်လိုင်းထားတဲ့ workspace တွေကိုများအတွက်ပူးပေါင်းများ၏ဧရိယာထဲမှာမီနိုင်တဲ့ တာဝန်စီမံခန့်ခွဲမှု , မယုံနိုင်စရာဖိုင် privacy ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ built-in တည်းဖြတ်ရေးစနစ်နှင့်ဤမျှလောက်ပို။
သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်နှင့်လူတိုင်းအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အစိုင်အခဲသည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုပံ့ပိုးပေးထားဖို့လိုပါလျှင်, Box ကိုရိုက်နှက်ရန်ခက်ခဲသည်။ သငျသညျထောင့်ကွက်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများသိမ်းဆည်းပြီးတည်းဖြတ်နိုင်အောင် Salesforce, NetSuite နှင့်ပင် Microsoft Office ကဲ့သို့အခြားလူကြိုက်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-အာရုံစူးစိုက် app များကိုပေါင်းစည်းစေနိုင်သည်။
အခမဲ့သိုလှောင်မှု: 10 GB အထိ
100 GB လောက်များအတွက်စျေးနှုန်း: တစ်လလျှင် $ 11,50
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းများကို 100 GB ကိုများအတွက်စျေးနှုန်း: အသီးအသီးအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်လလျှင် $ 6
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့များအဘို့န့်အသတ်သိုလှောင်မှုအတွက်စျေးနှုန်း: အသီးအသီးအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်လလျှင် $ 17
ခွင့်ပြု max ဖိုင်အရွယ်အစား: သိုလှောင်မှု 100 GB ကိုနှင့်အတူကိုယ်ပိုင် Pro ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အသုံးပြုသူများအတွက် 250 MB အထိ,5GB အထိ
မိုဘိုင်း apps များ: Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry ကိုပို»
သင်၏အဟောငျး Laptop ကိုသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အများစုမှာငွေ Get
သီးသန့်: အဆိုပါဆရာယောဟနျ Carmack အင်တာဗျူး
တစ်ဦးနှင့်အင်တာဗျူး Podcasts ခုနှစ်တွင် Track တွင်သင့်ဧည့် Keeping
ဒါပမေဲ့အံ့သွလူကြိုက်များလုံးဝအသုံးမကျ Website များ
Trello ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: အွန်လိုင်းလုပ်လုပ်ခြင်းများအတွက် Tool ကို
သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာနယူး Keyboards ကို Install လုပ်နည်း
PowerPoint 2010 Slide Show ကိုအတွက်အရောင်ပြောင်းမည် Black နဲ့ White ကရုပ်ပုံများ
အဘယ်သို့ငါတစ်က Windows Password ကို Disk ကို Reset Create သလား?
ဘယ်လို App ကို Developers သာ. ကောင်း၏လိုင်းမိုဘိုင်းလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်ပါသလား?
Linux ကိုစစ်ဌာနချုပ် vi vim - Unix စစ်ဌာနချုပ် gvim
No-စာချုပ်စားသုံးသူဆယ်လူလာဝန်ဆောင်မှု Senior ပစ်မှတ်ထား
မူလစာမျက်နှာမှာနှင့် Go ကိုတွင်သင့်ကို Nintendo Switch အားသွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Disk Utility ရဲ့ရှေးဦးသူနာပြုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာရဲ့ Drives ပြုပြင်
တစ်ဦးနဲ့ Mac ပေါ်မှာ Flash မေးခွန်း, Mark Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
ဗွီဒီယိုဂိမ်း Console အဒေတာဘေ့စနှင့်ဒုတိယမျိုးဆက်
ဖှဲ့စညျးထားနေပါမှ Trello အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
နယူး & Next ကို
ဆိုနီမှအသစ် STR-DN1070 မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Receiver အပေါ်မီးမောင်းထိုး
Web Design & Dev မှ
အလိုအလျောက်အပ်ဒိတ်လုပ်ပါဒါက iTunes ကိုအတွက်စမတ်ပြသစာရင်းများ Make
Excel ကိုတစ်ဦးသင်ထောက်ကူစာရွက် Rename လုပ်နည်း
Call of Duty: စစ်ပွဲ cheat နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များမှာကမ္ဘာ့ဖလား - PS3
Skype ကိုအကွောငျးကိုသင်လျစ်လျူရှု5အရာ
Pixelmator 3.3: တွမ်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲလ် Pick
သင့်ရဲ့ Computer ကို Fixed ရယူခြင်း: တစ်ဦးကအပြီးအစီးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
© 2021 my.eyewated.com